Umthengisi wempahla yokunxiba, ngokukhawuleza kwimfashini kunye nokuphuma | I-stockmarca
Ivenkile evulekile yempahla
IQOKELELO ELITSHA Iinkcukacha ezithe xaxe!
Cwangcisa urhwebo lwakho lwe-e
Ngendlela elula kakhulu unokuseta i-e-commerce yakho kwaye wenze ukwehla. Faka ikhathalogu yethu kunye neemveliso ezingaphezulu kwama-700 kwisitokhwe kwaye ujoyine umhlaba okwi-Intanethi.
Unayo ivenkile ekwi-intanethi?
Ukuba awunayo iwebhusayithi siza kukunika enye, ngokuthanda kwakho. Ngethambeka kunye neelogo ozikhethayo. Kwaye ukuba sele unayo, ungakhathazeki, siyakhathalela ukufaka isixhobo sethu sokungenisa ikhathalogu ukuze uqalise ukuthengisa kwangoko.
Ngenkonzo yethu yokuDropha uya kuba namakhulu ekubhekiswa kuwo ukuze uphumelele kwivenkile yakho ekwi-intanethi. Awuyi kuba nexhala nangantoni na ngaphandle kokuthengisa kuba ukuthunyelwa kwenziwa kuthi.
Siza kukunika ukufikelela kwimathiriyeli ukuze ubhengeze kwinethiwekhi yakho. Sicinga ukuba kubalulekile ukubhengeza kwi-Instagram nakuFacebook kwaye ngenxa yoku, siza kukunika isandla.
Amawaka emveliso esitokisini ngokuthumela kwangoko
Silawula iStock sakho
Ngaba ungumhambisi wefashoni ekhokelayo, izixhobo kunye nezihlangu? Silawula isitokhwe kwaye siyithengisela wena. Sinamava kunye nepotifoliyo ebanzi yabathengi esinokuthi sithumele isitokhwe sakho kuyo kwaye siyithengise ngaphandle kokukhathazeka nangantoni na.
Yintoni entsha kwiibhetshi
Sikunikezela ngeefashoni ezenzelwe umntu ngokubanzi ngexabiso elifanelekileyo. Iimpawu eziphambili zeenqanawa ezithunyelwa kwangoko ezinoluhlu kwiindawo zethu zokugcina. Sihlengahlengisa iimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Izinto zeLungu leZinto zeMatriki
I-Buffalo FW yabasetyhini izihlangu uLote
I-Buffalo SS yeLoti yoLuntu yabasetyhini
IiLococ zeLocot Lot
ULote Michael Kors Umfazi
Uthando lweLot Moschino Woman
LiuJo Umfazi uLote
ULote Karl Lagerfeld Umfazi
I-CLK yamadoda I-Polo Textile Lot
I-Napapijri Indoda yeLaphu yeLaphu
I-Lotbino yamadoda eyileyile yelaphu
I-Lot Fila Footwear yamadoda nabafazi
Izambatho zeBrand zabantwana (Intwasahlobo-Ihlobo)
KwiLot QGuapa Milano SS21
Iihempe zamadoda amaninzi
I-Etiem yamadoda yokuLungisa uLote
I-Lot Multibrand Footwear yamadoda nabafazi
IHarvey Indoda kunye noMfazi weLaphu yeThayile
ILote yeArtigli yeLaphu
I-XTSY yomfazi weLaphu yeThayile
Umfazi waseFranzese weLaphu
I-Lot yeLinen eyolukiweyo yabasetyhini
Jonga amaqashiso afumanekayo
Sihamba nawe kuwo onke amabanga ukukunika iinkonzo ezilungileyo kunye nengcebiso eyimfuneko yokwenza i-adventure yakho kwihlabathi lefashoni liphumelele ngokupheleleyo.
Vula ivenkile yakho yokunxiba neyokwasemoyeni
Siza kukunceda kuyo yonke inkqubo yokuseta ivenkile yakho kwaye uyigcwalise ngezona mveliso zangoku nezithandwayo. Kwaye ukuba uyayifuna, sakha iwebhusayithi yakho ukuze ukwazi ukuthengisa kwakhona kwi-Intanethi.
Ukulahla kunye nokulibala malunga nesitokhwe
Ngenkonzo yethu yokuDlakatha uya kuba namawaka eereferensi zokufezekisa impumelelo kwisitolo sakho se-Intanethi. Ukudibanisa ikhathalogu yethu kwiwebhusayithi yakho kunye nokunakekela ukuhambisa. Yintoni ongenayo iwebhusayithi? Sikwenzela yona kwaye sifundisa indlela oyisebenzisa ngayo.
Ikhathalogu ekwi-Intanethi ihlaziywa rhoqo
Sivuselela isitokhwe sethu sifumana iimveliso ezintsha yonke imihla kunye nezalathiso ezingaphezu kwama-30.000 ekuhlaziyeni rhoqo. Ukubonisana ukuze ubanike abathengi bakho ukuba yeyiphi eyona ntengiso ayifunayo kakhulu.
Inkonzo kunye nokuqwalaselwa
Inkonzo yabathengi abaqeqeshiweyo kwicandelo eliseSpain. Ngokuqinisekiswa kweminyaka engaphezu kwama-30 yamava kunye nabathengi abangaphezu kwama-2000 kwiYurophu iphela.
Ngaba ungumhambisi weempawu eziphambili? Silawula isitokhwe kwaye siyithengisela wena. Ngaphandle kokuba ube nexhala nangantoni na, senza njengabalamli phakathi kwakho nomthengi wokugqibela. Kudala silawula isitokhwe sabasasazi bethu ngaphezulu kweminyaka engama-30 sisiphumo sentengiso esihle.
Siyakunceda maxa onke ukuba uthathe ithuba kuzo zonke iindlela ezifanelekileyo zokuhambisa. Ukuthengisa kokubini kwivenkile ebonakalayo kunye nomjelo we-Intanethi, kunye nesitokhwe sakho okanye ngenkonzo yethu yokulahla.
Sixelele ngoku malunga neprojekthi yakho
Vula ivenkile yakho yempahla ebonakalayo
Sikunceda kulawulo lwevenkile yakho kunye nokutshintsha kwemveliso, sabelane nawe onke amava ethu. Akukho lungelo, akukho bukhosi, akukho bukhosi, akukho kukhethekileyo. NgeStockmarca uya kuba nenkululeko kunye nolawulo olupheleleyo lweshishini lakho ukuze likhule njengoko ufuna.
Ndifuna ukwazi okungakumbi
Ingaba ubusazi ngale nkonzo?
ApNapapijri uLote woMntu https://stockmarca.com/
#I #Dropshipping yindlela yokuthumela kunye nokuhambisa
➡QHAWULA AMABHANDU ETHU AYODWA https: //
IiLOCOCS Lot https://stockmarca.com/portfolio-i
Lo myalezo wempazamo ubonakala kuphela kwii-admins ze-WordPress
Kubekho ingxaki kwi-Instagram feed yakho.
Siza kukuxelela yonke into oyifunayo ukuze ukwazi ukwakha iphupha lakho ngonyawo olufanelekileyo. Kwaye ukuba sele unayo ivenkile, siya kukubonelela ngesitokhwe seempawu zethu ezilungileyo ukuze ube neemveliso ozithandayo kunye nokuzithengisa. Kuba ukutsiba akuyothusi, into eyoyikisayo ayisihlali kunye nenkanuko yokwenza.
Sitsalele umnxeba: 667-768-353
Iiyure zomsebenzi kunye nabathengi: NgoMvulo ukuya ngoLwesine ukususela ngo-9: 00 ukuya ku-17: 30 ntambama nangoLwesihlanu ukususela ngo-8: 00 ekuseni ukuya ku-16: 30 emva kwemini.
Contacto / Ngathi / Iimpawu ezizodwa / Legal / Ukuthumela ngaphandle
© 2020 I-stockmarca